Headline Nepal | अस्पतालको चरम लापर्वाहीले लाखाजुको ज्यान गयो, हनुमानघाटमा अन्त्येष्टि
१६ असोज, भक्तपुर । गत शुक्रवार सामान्य घाँटी दुखाईको उपचारका लागि हिंडेर इवामुरा अस्पतालमा इन्डोस्कोपी गर्न गएका लक्ष्मीकुमार लाखाजुको नर्भिक अस्पतालमा एक हप्तापछि निधन भएको छ । ७ दिन कोमामा राखेपछि नर्भिक अस्पतालले लाखाजुलाई आज शुक्रबार मृत्यु पुष्टि गरेको हो ।
लाखाजुको सम्पूर्ण उपचार डा. इवामुरा अस्पतालले गर्ने भएको थियो । पीडित परिवार र अस्पताल प्रसाशन बीच बिहिबार भएको धर्ना र बार्ताले विरामीको सम्पूर्ण उपचार डा. इवामुराले गर्ने भएको थियो यद्यपी लाखाजुको दुःखद निधन भयो ।
इन्डोस्कोपी गर्दैमा मान्छेको मृत्यु कसरी हुन्छ भन्दै मृतकका आफन्त र शुभचिन्तकहरु यतिबेला अचम्भित भएका छन् ।
मृतक लाखाजूको अन्तिम संकारका लागि अहिले भक्तपुरको हनुमानघाटमा ल्याएको छ । मृतक लाखाजुको निधन के कति कारणले भयो अझै खुलेको छैन । सामान्य उपचार र चेक जाँचकै सिलसिलामा सिकिस्त भई कोमामा पुगेर लाखाजुको निधन भएकाले यसलाई आम नागरिकले चासोका साथ हेरिएको छ ।
लक्ष्मीकुमार पेसाले सिकर्मी थिए । भक्तपुर नपा ९ च्याम्हासिंहमा उनले सञ्चालन गर्ने फर्निचरले उनको घरपरिवारको जिविका चल्दै आएको छ ।